Ny tombony azo amin'ny milina CNC
Masinina fanapahana CNC, fantatra ihany koa ho talenta famokarana fanaka lovia fanaka maranitra. Raha ny hevitr'ilay anarana dia vita amin'ny indray mandeha daholo ny dingana rehetra amin'ny lozisialy, fanodinana, fananganana miorim-paka sy ny tsy fisarahana amin'ny takelaka. Manolo tanteraka ny famokarana manual sy ny fanodinana izany. Noho izany, inona no tombony lehibe sy teknika fanodinana ny milina fanaka CNC ho an'ny fitaovana fanamboarana fanaka nentim-paharazana? Androany ny orinasa Jinan JCUT CNC dia maka ny vokatra amin'ny orinasa eto aminay ho ohatra hampahafantarana izany aminao amin'ny an-tsipiriany.
1. Ny milina CNC dia afaka manatsara betsaka ny fampiasana ny takelaka. Ny fanamboarana fanaka dia vita tanteraka amin'ny solosaina. Araka ny fanaka natao, ny angon-drakitra momba ny fampiasana ny birao dia azo alaina mivantana, ary avy eo ny birao dia azo raisina tsara sy zahana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko optimetype karazana. Ny tahan'ny fampiasana dia avo be, hatramin'ny 95%; Ny milina famafazana dia mampiasa mpanapaka fanamboarana ho an'ny fanetezana, izay afaka mihodina amin'ny lalana rehetra ary manapaka endrika manokana. Ny latabatra nentin-drazana nentim-paharazana dia tsy maintsy notapahina hatramin'ny farany, ary ambany dia ambany ny tahan'ny fampiasana ny takelaka. Ny tompon'ny latabatra sliding dia mitondra ny fandrefesana sy ny fanesorana ny kasety arakaraky ny sary.
2. Ny milina CNC dia manangona ny vidin'ny asa. Ny tsipika famokarana fanaka automatique dia azo ampiasaina tsara sy ampiasain'ny olona iray, ary raha ampiasaina ny andalana fanodinana fantsom-baravarana, ny mpiasa iray dia afaka miasa sy mampiasa azy io amin'ny fikorisana amin'ny sisiny. Ny latabatra sliding dia mitaky mpiasa roa farafahakeliny hiasa, farafahakeliny iray ny tompona mpitantana nahazo mari-pahaizana, ary ny haavon'ny asa dia avo, ary ny fitantanana ny mpiasa mahay dia sarotra ihany koa. Mifandraika amin'ny fandefasana andro iray, tsy mahatratra ny ampahatelon'ny mpividy CNC io.
3. Ny haingam-pandeha fanodinana ny masinina CNC lavitra dia lavitra amin'ny ohatry ny latabatra sliding. Ny tsipika famokarana fanaka otomatis fanamboarana dia dingana mitohy sy tsy tapaka, ary ny fanodinana fanodinana automatique CNC; raha ny latabatra mitsangatsangana dia mila manosika sy sakanana, ary miolikolika ny birao, izay fotoana maharitra sy asa. Raha fanitsiana tsy mety, dia avo be ny tahan'ny fahadisoana.
4. Ny tontolon'ny fiasan'ny milina CNC dia tsara tokoa. Ny fitaovana famoahana vovoka mahery vaika amin'ny milina fanapaka sy ny rafitry ny fitaovana milina mandrafitra dia saika nahatratra fanodinana famotehana tsy vovoka; somary miteny ihany, ny vovoky ny latabatra mitsotra no tena lehibe.
5. Ny milina CNC dia manamafy ny fandidiana sy fanaovana fanodinana karazana adala, kajy rehetra amin'ny solosaina, miaraka amin'ny tsy fahombiazana tsy misy ary tsy misy hadisoana. Tsotra ny fandidiana. Aorian'ny fampiofanana tsotra ataon'ny teknisianina dia azo ampiasaina amin'ny fandidiana, ary azo antoka sy tsy mampidi-doza. Ny latabatra sliding dia nahita kajy manual mba hialana amin'ny lesoka isan-karazany. Ny lozoro mitsotra dia tena mampidi-doza ary somary tsy mety. Mety hiteraka ratra manokana.
Ny tena izy rehetra, na avy amin'ny vidin'ny fanodinana izany, na ny kalitao fanodinana, ny teknolojia fanodinana ny milina CNC notapatapahina dia tsy mitovitovy amin'ny vatan'ny sliding latina. Io koa no fototry ny milina CNC amin'izao fotoana izao izay be mpitia ny mpanjifa.